ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်“ ပြိုကွဲသွားပြီ” ဟူသောကောလာဟလတစ်ခုကိုသင်ကြားဖူးပါသလား။ (podcast နှင့်ဆောင်းပါး) - Brain On Porn
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်“ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားပြီ” ဟူသောကောလာဟလတစ်ခုကိုသင်ကြားဖူးပါသလား။ (podcast နှင့်ဆောင်းပါး)
Porn ကိုစှဲမဟုတ်ပါဟုပြောသူကားအဘယ်သူသူများသည်ပြန်ကြားခြင်း (1hr)
ကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ် စောင့်ဆိုင်း, ပြည်သူ့အခုတော့ Porn တစ်ခုစွဲသည်မဟုတ်ဆိုကြသနည်း
[အဆိုပါ "debunking" ဆောင်းပါးများကို] ငါတုံ့ပြန်ရန်တောင်းဆိုတဲ့စောင့်ရှောက် အားလုံးဘုံအတွက်တဦးတည်းအရာရှိ- သူတို့က Nicole Prause EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုအနက်မှအပြာအပြာစွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်ဟုဆိုသည်။
အဘယျကွောငျ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သနည်း အမှန်တကယ် Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးသောကြောင့် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ porn စွဲ၏တည်ရှိမှု! အဘယ်ကြောင့်ငါဆိုကြသနည်း
ဒါပေမယ့်မညစ်ညမ်းစေရန် masturbate မှအနိမ့်အလိုဆန္ဒ - (အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုခဲ့သော) သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုမှာသူမညစ်ညမ်းစေရန် သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီတနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့လျော့နည်းဆန္ဒရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကင်းဘရစ်သုတေသီ Valerie Voon အဆိုအရယင်းတွေ့ရှိချက်ပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ခက်ခဲသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့ရသော Voon ရဲ့ 2014 ဦးနှောက်လေ့လာမှုနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။
Prause ရဲ့ 2015 EEG လေ့လာမှုမှာတော့သူမ၏အဖွဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ desensitization စွဲအတွက်ဘုံပျော်မွေ့ဖို့တုံးတုန့်ပြန်၏တစ်ဦးအရိပ်အယောင်ဖြစ်သောမိုးသည်းထန်စွာ porn သုံးစွဲသူများအတွက်။ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအတွက်ဒေတာရှိပါတယ်, ပြီးတော့ကောက်ချက်ရှိပါတယ်။ ထိပ်တန်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ရှင်းလင်းစွာကွဲပြားခြားနားသူမမလမ်းမှ Prause ရဲ့ဒေတာကိုအနက်ကိုဘော်ပြ။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ...
Prause ရဲ့လေ့လာမှုတွေသိပ္ပံဘက်မလိုက်ဖြစ်နိုင်သည်စဉ်သိပ္ပံပညာရှင်များမဟုတ်ကြဖော်ပြသည်။ သူမ၏ဟောင်းတဦးက Twitter ထားသောစာပိုဒ်တိုများအမှတ်တစ်ဦးအမှုဟူမူကား, လူတွေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရွေးချယ်အဘယ်ကြောင့် "လေ့လာ စွဲအနတ္တ "သွန်းလောင်းပေးခြင်းမရှိဘဲ။
ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးများကို detect လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါသလား? ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ။ ...
ဒါကြောင့်သင်က porn စွဲ debunk အမည်ခံထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုကိုတွေ့မြင်လာမယ့်အချိန်, သင် Ctrlcommand + F ကိုကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းနှင့်စာရိုက်သုံးပြီးဆောင်းပါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်စတင်လိမ့်မယ် "Prause ။ " အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူမ၏အကြီးအကျယ်အလုပ်ဝေဖန်နေကြသည် non-Prause အာရုံကြောစဉ်ကိုးကားပါလိမ့်မည် အထက်ဆက်စပ်လေ့လာမှုများချန်လှပ်လိမ့်မည်။